Xayawaanka lagu ogaado cudurka Nucleic acid
Badeecadani waxaa loo adeegsadaa ogaanshaha degdegga ah iyo baaritaanka cudurrada xoolaha.
Qalabka baaritaanka cudurka noolaha ee 'Pathogenic Microorganism'
Taxanahani waa soosaarkii "NAVID", shirkadda waalidka ee hidda-wadaha Janma.
Badeecadani waxaa loo adeegsadaa ogaanshaha degdegga ah iyo baaritaanka jeermisyada cudurada keena sida staphylococcus aureus, Escherichia coli O157: H7, listeria monocytogenes, vibrio parahaemolyticus, salmonella iyo bacillus cereus.
Mycoplasma pneumoniae qalabka ogaanshaha nucleic acid
Qalabka Nucleic Acid Detection Kit waxaa loo isticmaalaa baaritaanka Mycoplasma pneumoniae DNA ee nasopharyngeal swabs iyo bronchoalveolar lavage.
Wax soo saarkan waxaa loo isticmaalaa ogaanshaha tayada ee fayraska A iyo fayraska hargabka B nucleic acid ee cunaha ku dhaca iyo xaakada bukaanka ku jira fitamiin.
Shirkadda is-horumarisay jiilka cusub ee nukliyeerka nukliyeerka madasha ogaanshaha degdegga --- tiknoolajiyada ASEA waa mid sax ah, fudud oo dhakhso leh nukliyeerka nukliyeerka si dhakhso leh ogaanshaha nidaamka. Nidaamka oo dhan oo ka socda "sambal u qaadista natiijada" waxaa lagu dhammaystiri karaa 35 daqiiqo, iyadoo la ogaanayo horumar la taaban karo ogaanshaha asiidhka nukliyeerka laga soo bilaabo "heerka saacadda" illaa "heerka daqiiqadda".
Saxan, dhakhso leh, la qaadi karo oo si fudud loo isticmaali karo tikniyoolajiyadda is-weydaarsiga Isothermalku waa tiknoolijiyad ballaadhinaysa nukliyeer cusub (hiddo-wadaha). Maaddaama ay tahay cilmiga bayoolajiga meykooloojiyadda ee teknolojiyadda ogaanshaha fiiqfurka, habka falcelintu had iyo jeer waa heer-kul joogto ah, iyada oo loo marayo enzymes gaar ah iyo astaamo gaar ah si loo gaaro ujeeddada kordhinta degdegga ah ee nucleic acid.
Badbaadinta iyo firfircoonida shaybaarka fayraska (Nooca E), soosaarida degdega ah ee asiidhka nukleerka (DNA / RNA) (Nooca S / Nooca E), badeecada la farsameeyay ayaa loo isticmaali karaa baaritaanka caafimaad ee IVD.
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Ogaanshaha Wadarta Xalka
Tikniyoolajiyadda ASEA, jiil cusub oo madal si deg deg ah nukliyeerka loogu ogaado si madax-bannaan oo ay soo saarto shirkadda, ayaa ah tiknoolajiyad lagu ogaanayo deg-degga nukliyeerka ah ee saxda ah, fudud oo deg-degga ah, taas oo dhammaystiri karta geedi socodka oo dhan laga soo bilaabo "muunad-qaadista natiijooyinka" 35 daqiiqo, laguna ogaan karo horumar weyn oo ku saabsan ogaanshaha asiidhka nukliyeerka laga soo bilaabo "heerka saacadda" illaa "heerka daqiiqadda".
Iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada qaboojiyaha semiconductor, qalabka loo yaqaan 'nd360 fluorescent quantitative PCR' wuxuu si dhakhso leh u ogaan karaa habka balaadhinta PCR, iyo waqtiga-dhabta ah ee lagu ogaan karo astaamaha fluorescence-ka iyada oo loo marayo nidaamka ogaanshaha raadiyaha sare iyo telefishanka, iyo falanqaynta iyo habka loo maro barnaamijka falanqaynta ee xoogga leh.
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay. Xirmooyinka Tijaabinta Shiinaha, Canine Parvovirus (Cp), Qalabka Soo-saarista-Bilaashka ah, Qalabka Soo-saarista Acid Nucleic Deg-degga ah,